बलिउडका सुपरस्टार तीन खानले नपाएको मौका अक्षयले पाए,आखिर के थियो त्यस्तो मौका ? « Sajha Page
बलिउडका सुपरस्टार तीन खानले नपाएको मौका अक्षयले पाए,आखिर के थियो त्यस्तो मौका ?
बलिउडमा एकछत्र राज गरेका सलमान, आमिर, शाहरुख हुन् । तर यि तीन खान भन्दा कम छैनन् अक्षय कुमार । उनी निकै फरक रहेका छन् । अक्षय बलिउडमा अन्य स्टारले भन्दा बढी कर तिर्ने अभिनेताको रुपमा पनि पर्ने गर्छन् ।